Yusuf Garaad oo warbixin calool xuma badan ka qoray booqashadiisii Garoonka lagu hayo Somalidii laga raafay Islii | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Arimaha Bulshada Yusuf Garaad oo warbixin calool xuma badan ka qoray booqashadiisii Garoonka lagu...
Yusuf Garaad oo warbixin calool xuma badan ka qoray booqashadiisii Garoonka lagu hayo Somalidii laga raafay Islii
Waxaan fursad u helay in aan booqdo Garoonka Kasaraani ee magaaladan Nairobi. Waa goobta lagu hayo dad fara badan oo intooda badan laga soo qabqabtay xaafadda Eastleigh inta kalena magaalooyinka Kenya.
Waxaan goobta ku arkay dad dhowr boqol aan ku qiyaasay, in badan oo ka mid ahna waan isla hadalnay. Qiyaasteyda dadka aan arkay barkood am ka badan waa haween.Waxaan meesha ku arkay dad haysta waraaqo muujinaya in ay qaxooti yihiin oo si sharci ah loogu aqoonsaday in ay Kenya ku noolaaaan. Waxaa kale oo aan arkay ugu yar hal gabar oo haysata baasa-boor Soomaali ah oo uu u saaran yahay sharci deggenaasho Kenya oo dhacaya Agoosto 2014.
Previous articleDAGAALO CUSUB OO AL-SHABAAB IYO AMISOM KUDHEXMARAY GOBALADA GALGADUUD IYO HIIRAAN
Next articleHogaamiyayaasha Muslimiinta ee Dalka Kenya oo canbaareeyay raafka Soomaalida lagu haayo